कतै तपार्इंको मोबाइल फोन अवैध त छैन ? Archives - Nepal Japan
Tag: कतै तपार्इंको मोबाइल फोन अवैध त छैन ?
Posted on November 19, 2016 by krishna
गैरकानुनी रूपमा भित्र्याइएका मोबाइल उपकरण चलाइरहनुभएको त छैन । त्यसो हो भने तपाईंको उपकरण अबको केही महिनाभित्र काम नलाग्ने हुनसक्छ । किनभने अबको तीन महिनाभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्तर स्वीकृति टाइप अप्रुभल नभएका मोबाइल सेटको बिक्री र प्रयोगमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
आजको गोरखापत्र दैनिक बाट
Posted in पत्रपत्रिकाTagged कतै तपार्इंको मोबाइल फोन अवैध त छैन ?, मोबाइल